लभ साशाको संसार- मनोरञ्जन - कान्तिपुर समाचार
लभ साशाको संसार
पुस २९, २०७३ गोकर्ण गौतम
भिसा गर्लको प्रिमियरमा दंग पर्दै पुगेकी थिइन्, केकी अधिकारी । छोटो–मीठो भूमिका थियो उनको तर जसै फिल्म हेरिन्, उत्साह त्यसै उडेर गएछ ।
उनी आफैंले आफू पर्दामा आए/गएको पत्तै पाइनन्, आमदर्शकको त के कुरा १ कोमल मनकी केकीले निर्देशक प्रचण्डमान श्रेष्ठसँग यही बह पोखिन् । प्रचण्डले फिस्स हाँदै भनेछन्– ‘यसपटक यस्तै भयो, अर्को फिल्ममा तिम्रो लिड रोल पक्का ।’ केकीले पत्याइनन् । उनलाई लागेछ, प्रचण्डले फकाउन मात्र यस्तो भनेका हुन् । तर त्यो ‘जोक’ थिएन ।
भलै प्रचण्डको वचन पूरा हुन चार वर्ष लाग्यो । हिजो बिहीबार (पुस २८) बाट प्रचण्ड निर्देशित र केकी अभिनीत लभ साशा रिलिज भएको छ । प्रचण्ड रहस्य खोल्छन्, ‘भिसा गर्ल रिलिज पहिल्यै यसको प्लट दिमागमा आइसकेको थियो । त्यतिबेलै केकीलाई खेलाउँछु भनेर निधो गरिसकेको थिएँ ।’ यसमा केकीको अपोजिटमा छन्, अभिनेता कर्म । जो प्रचण्डको ‘अल टाइमफेट एक्टर’ हुन् । उनको पहिलो स्क्रिप्ट फस्ट लभ र पहिलो निर्देशन भिसा गर्ल दुवैमा कर्म छुटेका थिएनन् । तर लभ साशालाई लिएर केकी सबभन्दा ‘एक्साइटेड’ देखिन्छिन् । किन त ? भन्छिन्, ‘यो फिल्मबाट मेरो दुई वटा चाह पूरा भएको छ । प्रचण्डको निर्देशनमा काम गर्ने अनि कर्मसँग स्क्रिन सेयर गर्ने ।’ डेब्यु फिल्म सानो संसार हेरेदेखि नै कर्मको फ्यान रहिछिन्, केकी ।
प्रचण्डले लभ साशाका लागि औपचारिक प्रस्ताव राख्दा केकी अमेरिका थिइन् । उनी नेपाल फर्कने र स्क्रिप्टको फस्ट ड्राफ्ट तयार हुने मिति करिब उस्तै थियो । स्क्रिप्ट पढेपछि छक्कै परिछन्, डेढ दर्जन ज्यादा फिल्मकी यी हिरोइनले यस्तो ‘फाइन स्क्रिप्ट’ भेटेकै थिइनन् रे । आफूले खोजेजस्तै प्रोजेक्ट हात लागेको आभास भएछ उनलाई । पारिवारिक र लभस्टोरी फिल्ममा रुचाइएकी केकी भन्छिन्, ‘मैले मात्र होइन, लभ साशामा आजको पुस्ताले कहीं न कहीं आफूलाई पाउँछन् । जीवनसँग अति नजिक छ यो फिल्म ।’
हिरोइन मात्र किन, निर्देशकबाटै कन्टेन्टको कुरा सुनौं न त ।
प्रचण्डका अनुसार आफू र आफ्ना साथीभाइहरूको जीवन भोगाइको प्रतिफल हो, लभ साशा । आजको समयमा नेपालमै बस्ने युवायुवती पनि विश्वव्यापी सञ्जालमा जोडिएका छन्, आधुनिकता र प्रविधिको उच्चतम विकासलाई अनुभूत गर्न पाएका छन् । अर्थात् फस्ट वल्र्डकै युवा पुस्ताको झैं ‘एक्सपोजर’ पाएका छन् । तर बस्ने त यही समाजमा हो, जहाँ पुरातनवादी सोच हावी छ, सांस्कृतिक रूपमा बाँधिनुपर्छ । मनमा धेरै इच्छा हुन्छ, अभिव्यक्त गर्न सक्दैनन् । पढाइ पूरा हुन पाएको हुन्न, विवाहको प्रेसर आइलाग्छ । प्रचण्ड सुनाउँछन्, ‘यी दुई विपरीत माहोलका कारण आन्तरिक द्वन्द्वमा फस्न बाध्य युवायुवतीको मनोवैज्ञानिक पक्षलाई कथामा उधिनेको छु ।’
फिल्ममा दुई मुख्य चरित्र छन्, पर्ल (कर्म) अनि साशा (केकी) । पर्लको अर्थ मोती हुन्छ भने आर्य संस्कृतिमा साशाले मानवताकी देवी भन्ने बुझाउँछ । थिएटर हुँदै फिल्मी दुनियाँमा फड्को मारेका कर्म पनि यी दुवै पात्रमा ‘मिड ट्वान्टीज’ का केटाकेटीले आफूलाई अनुभूत गर्ने दाबी गर्छन् । तर जीवनसँगको सामीप्यता देखाउने र सरल न्यारेसन भएको लभ साशाको सुटिङ भने बडो जटिल भइदियो । कतिसम्म भने फुरुङ्ग पर्दै पोखरास्थित सेटमा पुगेकी केकीलाई एकाध दिनपछि कहिले भागौं जस्तो भएछ । नहोस् पनि कसरी, हरेक सिनका लागि २० टेक त सामान्य हुन्थ्यो । कुनै–कुनैमा त ५० टेक सम्म ।
‘मलाई त प्रचण्डको काम गर्ने शैली थाहा थियो । त्यसमाथि निर्देशकले चाहेजस्तो काम ननिक्ली सयौं टेक भए पनि ‘गिफ–अप’ गर्नु हुन्न भन्नेमा निश्चित थिएँ/छु’ कर्मले सुटिङका सुरुवाती दिन सम्झिए, ‘तर केकी त पूरै नर्भस र हतोत्साहित भइन् ।’ केकी आफैं पनि आफ्नो ‘इगो हर्ट’ भएको स्विकार्छिन् ।
तर दस दिन सुटिङ हुन नपाउँदै एउटा दु:खद घटना घट्यो, प्रचण्डको बुबाको देहान्त भयो । सुटिङ रोकियो । यही अवधिमा केकीले आफूलाई ‘ट्रान्सफर्म’ गरिन् । भन्छिन्, ‘अलि ड्रामाटिक र लाउड एक्टिङ गरिरहेको बानीले गर्दा समस्या आएको थियो तर पछि मैले गर्नुपर्ने र निर्देशकले चाहेको काम ठम्माएँ ।’ कर्मको साथबिना आफूमा यो बदलाव सम्भव नहुने उनको भनाइ छ । केकी र कर्मको इच्छा अनुरूप नै प्रचण्डले फेरि सुरुबाटै सुटिङ सुरु गरे । त्यसपछि त तीनै जनाले चाहे जस्तो काम निस्कियो । शंकै छैन, कर्म र केकी दुवै प्रतिभाशाली कलाकार हुन् । प्रचण्ड चाहिँ उनीहरूको कुन पक्षबाट बढी प्रभावित होलान् त ? अभिनयमा स्वभाविकता खोज्ने यी निर्देशक भन्छन्, ‘कर्म निकै इमानदार र मिहिनेती कलाकार हो । केकीको चाहिँ पात्रलाई आत्मसात् गरेपछि अभिनय तह नै अर्कै हुँदोरहेछ, एकदमै जीवन्त खालको ।’
फस्ट लभले राम्रो व्यापार गरे पनि प्रचण्डको भिसा गर्ल बक्स अफिसमा सफल हुन सकेन । यो एक दशकको अवधिमा कर्म अभिनीत झन्डै डेढ दर्जन फिल्म रिलिज भए तर सानो संसारपछि उनीप्रतिको पलाएको अपेक्षा पूरा हुन सकेन, अधिकांश फिल्म फ्लप भए, लुटलगायतका हिट भएका एकाध फिल्मको जस पनि उनले पाएनन्, फलत: उनको छवि ‘अनलक्की एक्टर’ का रूपमा बन्न थालेको छ । केकीको हविगत पनि कर्मको भन्दा भिन्न छैन, म्युजिक भिडियोमा राज गरेपछि फिल्मी ‘इन्ट्री’ मारेकी केकी अभिनीत पछिल्ला फिल्मले न पैसा कमाए, न प्रशंसा । बरु नयाँ हिरोइनको बोलवाला बढेको छ । अर्थात्, प्रचण्ड, कर्म र केकीको करिअरका लागि लभ साशाको व्यापार र प्रतिक्रिया अर्थपूर्ण छ । त्यसमाथि यो फिल्ममा प्रचण्ड निर्देशक अनि कर्म र केकी कलाकार मात्र होइनन्, तीनै जनाको पनि सेयर छ । डर त होला नि ? यो प्रश्न उनीहरूलाई छुट्टाछुट्टै गरिएको थियो तर उत्तरको सार उस्तै थियो, ‘नर्भस पनि छौं, एक्साइटेड पनि । तर हामीले इमानदार र मिहिनेत गरेर काम गरेका छौं । त्यसैले अडियन्सको ताली वा गाली जे पाए पनि हामीलाई स्वीकार्य छ ।’
प्रकाशित : पुस २९, २०७३ १४:३०
न मेनु छ । न त वाईफाई । भित्र पस्नेबित्तिकै रेस्टुरेन्ट वा क्याफे जस्तो नि लाग्दैन । सामुदायिक स्कुलका जस्तै बेन्च र चारखुट्टे टेबल छन् ।
वेटर अर्डर टिप्न नि आउँदैनन् । भान्साभित्र तामाङ लुक्स भएका महिला डेक्चीमा भात पकाउँदै देखिन्छन् । कुकरमा दालको सिट्ठी लाग्दैछ । बाहिर टेबलमा हात धोएर बसेकाले अर्डर टिपाएको सुनिन्छ, ‘ल दुई ठाउँमा खाना लगाइहाल्नुहोस् हतार छ । काममा फर्किहाल्नुपर्ने छ ।’
यस्तो दृश्य संवाद प्राय: हरेक दिन बिहानको खाना खाने समयमा एयरपोर्ट अघिल्तिरको लामा भान्साघरमा देखिन्छ । १० वर्षअघि यो भान्साघर जस्तो थियो, अहिले पनि त्यस्तै छ । १० लाखभन्दा कम लगानीमा थालिएको यो हेर्दा सामान्य भान्साघर हो । तर, यहाँ खान आइपुग्ने ग्राहकचाहिँ अचम्मै छन् । ‘हेलिकप्टरका साहु, जहाजका मालिक, सञ्चालक, पाइलट, एयरलाइन्स, अध्यागमनका कर्मचारीलगायत यहाँ पाक्ने नेपाली खानाका पारखी हुन्,’ सञ्चालक बीआर लामा भन्छन् । ती अतिथि यहाँ स्टिलको थालीमा गाउँले पारामा पस्किने खानाको स्वाद लिन चुक्दैनन् । तपाईं नि भोकले ब्याकुल भएर नेपाली खाना टेस्ट गर्न पुगिहाल्नुभयो भने कि त खाली टेबल नपाइएला, पाइए भात सकिएको अवस्था पनि हुन सक्ला । तर भान्साघरकी सञ्चालिका मती लामाले भोकले दोब्रिएको तपाईंको पेटका लागि गुन्द्रुकको अचार, गाउँको चामलको भात, अकबरे खुर्सानीको अचार, घिउ, मोही केहीबेरमै पस्केर ल्याइदिन्छिन् । ‘हाम्रो विशेषता भनेकै नेपाली टेस्ट मात्रै हो,’ सञ्चालक लामाले भने ।
बीआरलाई यो पसल सञ्चालनमा दिदीबहिनी उषा, निशा र मनीषा अनि भाइ सानुरामले साथ दिएका छन् । यहाँ नेपाली खाना र भुटन मात्रै पाइन्छ । तामाङ पृष्ठभूमिबाट आएको भए पनि नेपाली खानामा मात्रै आफ्नो परिवारले ४० वर्ष बिताइसकेको बीआरले बताए । ‘भान्साघर भनेका छौं, तर यहाँ न ढिँडो पाक्छ न त अन्य तामाङ परिकार । हामी दालभातमै मात्र केन्द्रित भयौं/छौं,’ रामेछाप थातथलो भएका बीआरले भने ।
खासमा यो पेसा उनका ठूलाबा गणेशले सुरु गरेका हुन् । ०३४ सालमा गणेशले सिनामंगलमा कुखुराको मासु, भटमास आदि खाजा बनाउन सुरु गरे । त्यसबेला कालो कोट लगाउने भन्सारका सुब्बासापहरूको खाजा खाने अड्डाका रूपमा त्यो पसल चल्यो । तिनै कालो कोट लगाउनेहरूले नै भनेपछि गणेशले खाना बनाउन पनि सुरुवात गरे । ‘गाउँमा ढिँडो र गुन्द्रुकले मात्रै नपुग्ने भएपछि उबेला दौंतरीहरूको लहलहैमा लागेर बनारस पुगेको थिएँ, त्यहीं पुगेपछि दालभात देखें । होटलमा काम गरें । त्यतै सिकेको सीपलाई यता काठमाडौं फर्केपछि उतारें,’ ७४ वर्षेले भने । त्यसबेला सिनामंगल खुबै चल्तीको बजार थियो । भन्सारमा माल छुटाउन आउनेहरू सिनामंगलमा खोलिएका फेमस होटलसम्म पुग्थे । आधुनिक खाजा अन्तर्गत चाउचाउको जमाना थियो । सादा खाना र स्पेसल खाना खुबै चल्तीमा थिए । गणेश पुराना दिन सम्झँदै भन्छन्, ‘त्यसबेला म ११ रुपैयाँ मासिक तलबमा इन्डियन एयरलाइन्सको लोडर भई काम गरिरहेको थिएँ, जब होटल चलाउन थालें, यताको कमाइले आकर्षित गरेपछि जागिर छाडें, दालभात बिक्री गर्न थालें, यो क्रमलाई मेरा सन्तानहरूले पनि निरन्तरता दिइरहेका छन् । भान्साघरले दैनिक १ सय ५० जनालाई खाना खुवाउन सक्छ ।